BAHDILAAD: Gaalkii Diinta Islaamka Wax Ka Sheegay Ee Conor McGregor Oo Ciyaaraha Feedhka MMA Kaga Fadhiistay Waji Gabixii Uu Kala Kulmay Feedhyahanka Muslimka Ah Ee Khabib. - Gool24.Net
BAHDILAAD: Gaalkii Diinta Islaamka Wax Ka Sheegay Ee Conor McGregor Oo Ciyaaraha Feedhka MMA Kaga Fadhiistay Waji Gabixii Uu Kala Kulmay Feedhyahanka Muslimka Ah Ee Khabib.
March 26, 2019 Saed Balaleti
Feedhyahanka Conor McGregor ayaa si buuxda u shaaciyey inuu ka fadhiistay ciyaaraha legdinta, feedhka iyo laagga wada-socda ee MMA (Mixied Martial Arts) kaddib fadeexaddii kasoo gaadhay ciyaartii niyad-jabka uu ka qaaday ee feedhyahanka Muslimka ah ee Khabib ku garaacay bishii October.
Conor McGregor oo cadho wayn kala kulmay umada muslimiinta ah kadib markii uu Khabib ku aflagaadeeyay diintiisa Islamka ayaa hadda shaaciyay in dagaalkii Khabib ee MMA uu ahaa kii ugu danbeeyay ee uu soo qaatay, wuxuuna aduunka kaga yaabiyay sida lama filaanka ah ee uu go’aankan ugu dhawaaqay.
Conor McGregor oo la sugayay inuu garoomada kusoo laabto garoomada April 6 oo ah xilliga uu ka dhamaanayo ganaax lagu riday kaddib feedhkii Khabib ee rabshadda dhaliyey, ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay inuu gabi ahaanba iska daayay ciyaarahan.
Conor McGregor oo usbuucii hore sheegay inuu doonayo inuu mar kale ka hor tago ninkii sida xun u garaacay ee Khabib iyo waliba inuu niyadda ku hayo inuu mar kale ballansado feedhyahanka Floyd Mayweather, ayaan sheegin sababta dhabta ah ee uu uga fadhiistay ciyaaraha, balse qoraal uu ku baahiyey bartiisa Twitterka ayaa uu ku caddeeyey inuu iska siibay golofisyada dagaalka.
“Waxaan go’aansaday inaan ka fadhiisto ciyaaraha rasmiga ah ee loo yaqaano ‘Mixed Martial Arts’ maanta. Waxaan rajaynayaa in asxaabtaydii hore ay hore usii wadi doonaan tartanka, laakiin anigu waan ka fadhiistay.” Ayuu ku yidhi qoraalkiisa.
Maaha markii koowaad ee Conor McGregor uu ku dhawaaqo inuu ka fadhiisanayo ciyaaraha, balse sannadkii 2016 ayuu sidan oo kale sheegay, ka hor intii aanu kusoo laabanin feedhka.
Ninkan u dhashay waddanka Ireland, ayaanay jirin baahi lacageed oo ku qasbaysa inuu kusii jiro xayndaabka feedhka, balse waa nin shaqaysta oo iska leh ganaciyo lagu magacaabo Proper 12 Whiskey oo khamriga iyo sharaabka lagu sakhraamo ah, halkaas oo ay lacag badan kasoo gasho.
Si kastaba ha ahaatee, Khabib ayay sharaf u tahay in uu noqday shaqsigii ugu danbeeyay ee bahdilaada ku sameeyay Conor McGregor isla markaana ku qasbay in uu iskaga fadhiisto ciyaaraha MMA ee taas oo hadda Khabib taariikhda u gali doonta.